Muuqaal: Arin naxdin leh hadana Ugub ah oo ka dhacday Magaalada Hargeysa |
Muuqaal: Arin naxdin leh hadana Ugub ah oo ka dhacday Magaalada Hargeysa
Magaalada Hargeysa Xarunta maamulka la baxay SOomaaliland waxaa ka dhacday arin naxdin leh taas oo qabsatay gabar doonatay deyn ka timid hagbad ama ayuuto ay ku jirtay sida ay shaacinayaan dadweynaha ku dhaqan xaafada ay ka dhacday arintan.
Police-ka ayaa sheegay in gabardha ay u doonatay qoys deyn ay ku lahayd balse is afdhaaf ka dib ay u geysteen gabadha dil iyagoo ka dibna jar jaray kuna aasay god ay ka dhex sameeyeen gudaha guriga ay degenaayeen .
Dhacdadan oo dhacday bishii hore horaanteedii ayaa dabagal iyo tixraac ka dib ay u suurta gashay ciidanka police-ka Hargeysa in ay helaan meydkii gabadha xabsigana dhigaan ku dhowaad 8 qof oo lala xiriirinayo dembiga gabadhan laga galay.
Daawo Warbixin ku saabsan warkan oo muuqaal ah.
Arintan ayaa ah mid ugub ah islamarkaana aanan ku badneyn dhegaha bulshaweynta Soomaaliyeed iyadoo sanado badan ka dib mar la maqlo.
Waxay arintan u soo shabahdaa dhacdo kale oo sanadkii hore ka dhacday magaalada Boosaaso xarunta Gobolka Bari taas oo nin la dilay hadana lagu aasay god aqalkii hurdada laga sameeyay, iyadoo ay maxkamadi xukun ku riday dadkii ka dambeeyay falkaas ee lagu helay.